Faah Faahin: Xoogaga Al Shabaab oo Weerar cagmarin ah ku qaaday saldhigga ciidanka dowladda ee Qalimoow Sh/dhexe.
Sunday February 02, 2020 - 12:17:29 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Ciidamo aad uhubeysan oo katirsan Al Shabaab ayaa saaka weerar culus kula jarmaaday saldhig weyn oo ciidamada dowladda Federaalka ay ku leeyihiin deegaan katirsan Sh/dhexe.
Wararka ka imaanaya duleedka degmada Balcad ayaa sheegaya in weerar cagmarin ah uu lakulmay saldhigga ciidamada dowladda ee deegaanka Qalimoow, warar hordhac ah ayaa sheegaya in xoogaga weerarka qaaday ay la wareegeen gacan ku heynta deegaanka.
Ciidamada Al Shabaab ayay usuurtagashay in ay dagaalka ku dileen 13 askari oo ay kamid ahaayeesheen saraakiil ciidan iyagoona gacanta ku dhigay saanado hub ah.
War rasmi ah oo kasoo baxay taliska ciidamada Al Shabaab ayaa lagu sheegay in weerarka saaka ka dhacay saldhigga ciidamada dowladda ee Qalimoow lagu dilay 13 askari waxaana dadka dhintay kamid ahaa saraakiil ciidan.
"Mujaahidiinta ayaa saaka soo afjaray saldhig ay maleeshiyaadka murtadiinta uga sugnaayeen deegaanka Qalimoow ee wilaayada Sh/dhexe, dhimashada murtadiinta waa 13 askari oo ay ku jiraan laba sarkaal oo lagu kala magacaabi jiray Indhabuur oo ahaaa sedax xidigle Urur iyo sarkaal kale oo la oran jiray Jilibeey" ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Al Shabaab.
Wararka ayaa intaas ku daraya in intii uu dagaalku socday gaari tiknika ah laga gubay ciidamada dowladda islamarkaana laga qabsaday saanado hub ah oo ubadan qoryaha fudud.
Sidoo kale xoogaga Al Shabaab ayaa weeraro ku ekeeyay saldhigyo ay ciidamada dowladda Federaalka ka sameysteen deegaannada Garsaale iyo ilbiq oo dhammaantood dhaca wadada isku xirta magaalooyinka Jowhar iyo Balcad ee Sh/dhexe.